TWITTER ကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို - တွစ်တာ - 2019
AutoCAD လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှု tools တွေအမျိုးမျိုးပေး, 3D-မော်ဒယ်, ဒီဇိုင်းနှင့်မူကြမ်းရေးဆွဲများအတွက်တော်တော်လေးလူကြိုက်များနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၏သင်တန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ Windows ပေါ်မှာ run နေတဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဒီဆော့ဗ်ဝဲကို install အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးကို PC ပေါ်မှာ AutoCAD Install
တစ်ခုလုံးကို installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသုံးတန်းတူခြေလှမ်းများအရေးပါမှုသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဤ software ကိုပုံမှန်အားဖြင့်အချို့သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကို configure လုပ်ထားကြောင်းကိုမေ့လျော့တော်မသငျ့သညျ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်သီးခြားဆောင်းပါးထဲမှာပွောပွီတယျ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: AutoCAD software ကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နှင့် AutoCAD သုံးစွဲဖို့အလို့ငှာ, သင် Autodesk ၏တရားဝင် website တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျကိုရက်ပေါင်း 30 ကြာတဲ့စမ်းသပ်မှုလိုင်စင်ကို အသုံးပြု. ဒေါင်းလုပ်အချိန်တွင်အခမဲ့ account တစ်ခု register နိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါလင့်ခ်ပေါ်တွင်စာမျက်နှာဖွင့်ပါနှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကို click "အခမဲ့စမ်းသပ်".
အခုဆိုရင်သင် button ကိုသုံးစွဲဖို့မလိုအပ် "AutoCAD ၏ဒေါင်းလုပ်"ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့အစိတ်အပိုင်းများရွေးချယ်ရေးတို့အတွက်ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်။
စာရင်းထဲက, လာမယ့်ရန်အမှတ်အသားသတ်မှတ်ထား "AutoCAD" နှင့်စာနယ်ဇင်း "Next ကို".
စနစ်လိုအပ်ချက်များကိုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက် button ကို click ကျေးဇူးပြုပြီး "Next ကို".
drop-down list ကိုကနေတဆင့်လာမယ့်စင်မြင့်မှာ 'option ကို specify "စီးပွားရေးအသုံးပြုသူ"သင်၏ operating system ၏စွမ်းရည်ကို Select လုပ်ပါနဲ့သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးဘာသာစကားဖော်ထုတ်။
ထိုအခါပြီးသားလိုအပ်ချက်အပေါ်တည်ဆဲမှအကောင့် Signup သို့မဟုတ်ရဲ့ login လိုက်နာပါ။
သင့်လျော်သောလယ်ကွင်းများနှင့်ကလစ်အတွက်တောင်းဆိုထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမဖြစ်မနေဒါဟာဖြစ်ပါသည် "ဒေါင်းလုပ် Start".
ပြတင်းပေါက်ကတဆင့် "သိမ်းဆည်းခြင်း" အဆိုပါ PC ကိုအပေါ်တစ်ဦးသင့်လျော်သောနေရာအရပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါနှင့် button ကိုနှိပ် "Save".
installation ဖိုင်ကို download လုပ်မယ့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖျော်ဖြေလုပ်ရပ်များပြီးနောက်။ အဓိက AutoCAD window ကို installation ကိုသှားဖို့, ကစတင်ဖြည့်စွက်ဖို့ download ပြုလုပ်စောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဖိုင်တွေကိုဖြည်နေကြပြီးနောက် installation ကိုပြတင်းပေါက်မှာအလိုအလျောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်မဟုတ်အချို့သောအကြောင်းပြချက်ဆိုပါက, သင့် PC မှာအတူတူပင် directory ကိုကနေဒေါင်းလုပ်လုပ် file ကို run ။ မိမိတဲအရွယ်အစား 14-15 MB အထိဖြစ်သင့်သည်။
နောက်ဆက်တွဲတပ်ဆင်ခြင်း, သင်န့်အသတ်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးရွေးချယ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများကို download အပေါ်သို့ချက်ချင်း installed လိမ့်မည်။
အဆင့် 2: Install
ကြင်နာစွာတစ်ဦးကို PC ၏ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များပမာဏလိုအပ်သမျှသောအစီအစဉ်များနှင့် applications များကို turn off ဖို့မေတ္တာရပ်ခံအောက်မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားသက်သာ setting ကိုအဘို့။ သင်တပ်ဆင်ခစဉ်အတွင်းဒီလုံးဝဖြစ်နိုင်ခြေမအောင်မြင်မှုများကိုလျစ်လျူရှုပါ။
ဒေါင်းလုပ်ပြီးစီးပေါ်မှာလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုစတင် install သငျ့သညျ။ သင့်ကွန်ပျူတာ၏ပျင်းရိအချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးအလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။
စာနယ်ဇင်းများ၏ကနဦးအဆင့်မှာ "တပ်ဆင်" အားလုံးအစိတ်အပိုင်းများအလိုအလျောက်တပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ် "Tools များနှင့်အသုံးအဆောင်များ Install".
ဒုတိယကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပြတင်းပေါက် AutoCAD များအတွက်အပိုဆောင်း utilities setting များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သူတို့၏လုပ်ရပ်များ၏အကျိုးဆက်များကိုသိလျှင်အစိတ်အပိုင်းများကိုသာဖြစ်သင့်သည်ကိုပိတ်ထားပါ။
အသုံးပြုသူကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ် "တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းကြောင်းကို" တင်သွင်းအစိတ်အပိုင်းများကို။ ဒီသက်ဆိုင်တဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုအသုံးပြုဖို့ပါ။
ဆက်သွားဖို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Install"။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးနောက်အကဲဖြတ်သည့်စနစ်စတင်လိုအပ်သောဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
အပိုဆောင်းအစိတ်အပိုင်းများတပ်ဆင်ပြည့်စုံသောအခါ, ပြတင်းပေါက်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်နှင့်အတူဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျနောကျတယ့်အမှတ်အသားထားရန်လိုအပ်ပါတယ် "ငါသည် accept" နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
အဆိုပါ utilities နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်, သင်သည်တစ်ဦးချင်းစီအစိတ်အပိုင်းများကိုမဆို disable သို့မဟုတ် enable နိုင်ပါတယ်။
ဤနေရာတွင်အရေးအပါဆုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖြစ်ပါသည် "Autodesk AutoCAD"အပိုဆောင်းချိန်ညှိမှုများအတော်များများရှိခြင်း။ ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်သူတို့ကိုပြောင်းလဲပါ။
တောငျးဆိုခကျြအပျေါမှာ, ပရိုဂရမ်နဲ့နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းများကိုတပ်ဆင်ရန်ဖိုင်တွဲကိုသတ်မှတ်။ အမှားများကိုအလုပ်အတွက်ပေါ်ပေါက်စေခြင်းငှါကတည်းကသို့သော်ဤတစ်ခုသာနောက်ဆုံးအပန်းဖြေစခန်းအဖြစ်လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
Installer ကို setting များကိုများ၏ဖြစ်စဉ်ကိုဖြည့်ပြီးနောက်ကလစ် "Install".
ပထမဦးစွာ operating system အတွက်အထောက်အပံ့ software ကို install လုပ်ပါ။
ဒါဟာစာကြည့်တိုက်၏အဓိကဖိုင်တွေ၏ installation ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ အမှား၏ဖြစ်ရပ်အားလုံးကိုကျော်နောက်တဖန်မစတင်ရပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းကအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကန့်သတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
ပထမဦးဆုံးသုံးစွဲခြင်းမပြုမီ, ကကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ဖို့ဝန်ဆောင်မှုကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့ OS ကိုပြန်ဖွင့်ဖျော်ဖြေဖို့နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
system ပေါ်တွင်လှည့်အပျေါမှာသင့်ရဲ့ PC မှာ Autodesk AutoCAD installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပတ်သက်, နောက်ဆုံးခြေလှမ်းမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ဖြေရှင်းရာမှာနှေးကွေး AutoCAD
အဆင့် 3: Launch
ယင်းအလိုအလြောကျ desktop ကိုထည့်သွင်းခြင်း, AutoCAD executable file ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ကနဦးလုပ်ငန်းစဉ် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်, setting အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, ပထမဦးဆုံးပြေးသည်။
မှတ်ချက်: သင် Autodesk, ဆောင်းပါး၏ဤအပိုင်းကို run အခြားထုတ်ကုန်များနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ရှိပါတယ်လျှင်သင်ရိုးရှင်းစွာကျော်သွားနိုင်တယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: AutoCAD Program ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို
ကနဦးပြတင်းပေါက်များတွင်လိုင်းဖြည့်ပါ "e-mail",တရားဝင် site မှ software ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည့်အခါသုံးစွဲဖို့, E-Mail ကသတ်မှတ်ခြင်း။ ဒါ့အပြင်လိပ်စာအပြင်၌သငျ Autodesk အကောင့်မှသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အောင်မြင်စွာအတွက် logging ပြီးနောက်သင်လက်ရှိလိုင်စင်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပြတင်းပေါက်နှင့်အတူပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှု၌, စမ်းသပ်ဗားရှင်း၏ကျန်ရှိသောအချိန်။
ဒီဝင်းဒိုးကိုပိတ်လိုက်ပါ, သင်လွတ်လွတ်လပ်လပ် Autodesk AutoCAD ၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးကိုသုံးနိုင်သည်။
ပြတင်းပေါက်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာရှိတဲ့ control panel ထဲကများ၏အကူအညီဖြင့်ကိုယ်တိုင်ဟုခေါ်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒီမှာကိုလည်းအကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှု AutoCAD အချို့ကိုနောက်ထပ် features တွေရရှိနိုင်ကြသည်။
ထို့အပြင်ဖတ်ရန်: AutoCAD စတင်ရန်အဘယ်အရာကိုပျက်ကွက်လျှင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ပြီးနောက်သင်အလွယ်တကူအနာဂတ်အလုပ်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်ရှိ program ကို install နှင့် configure လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ AutoCAD နှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်နောက်ထပ်မေးခွန်းများရှိပါကအောက်ပါမှတ်ချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကိုမေးရန်သေချာစေပါ။